राष्ट्रिय माविलाई कलंकित हुनबाट जोगाऔं ! — donnews.com
डन न्यूज खोज प्रमुख समाचार सम्पादकीय
विद्यार्थी संगठनका नेता र महिला अधिकारकर्मीहरु कता छन् ?
कोरोना संक्रमणका कारण विद्यालयहरुले लिने परीक्षामा केही खुकुलो नीति लागू भएसँगै यसको चरम दुरुपयोग पनि ह्वात्तै बढेको पाईएको छ । विद्यालयमा नै परीक्षा लिने, उत्तरपुस्तिका चेक गर्ने र नम्बर पठाउने भएपछि केही विद्यालयका शिक्षकहरुले यसको गलत फाईदा उठाएको पनि देखिएको छ । राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय पोखराको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ परीक्षाका नाममा शिक्षकहरुले गरेको हर्कत निन्दनीय र जघन्य अपराधका रुपमा लिन सकिन्छ । असजिलो र कठिन विषयको परीक्षामा सजिलै पास गराई दिने लोभ देखाएर उत्तरपुस्तिका, प्रश्नपत्र सहित होटलका कोठामा छात्रालाई पु¥याईनु सामान्य घटना भने हुँदै होइन । यस विषयमा सडकमा चर्को नारा घन्काउने विद्यार्थी संगठनका नेता र महिला अधिकारका चर्का भाषण गर्ने अधिकारकर्मीहरु वेखबर भएको देख्दा टिठ लागेर आएको छ । राजनीतिक मुद्दामा दलले खटाए अनुसार कसैको हुर्मत लिन, विरोध गर्न र नङ्ग्याउन सडकमा उत्रिने विद्यार्थी संगठन र डलर खेतीका पछाडि कुद्ने महिला अधिकारकर्मीलाई यो घटना सामान्य लाग्नु पनि अनौठो भने होइन ।
परीक्षा दिन विद्यालयमा पुगेकी छात्रालाई मोटरसाईकलमा राखेर कुनै एक होटलको बन्द कोठामा पु¥याउनु जति गम्भिर, दुःखद र जघन्य अपराध अर्को हुनै सक्दैन । कुन नियतले शिक्षकले विद्यार्थीलाई होटलको बन्द कोठामा पु¥याए भनेर भनिरहन नपर्ला । के यो सामान्य घटना हो त ? के यस्तो हर्कत एउटा शिक्षकले मात्र गर्न सम्भव छ त ? पक्कै पनि छैन । यस घटनामा विद्यालयका प्रधानाध्यापक र सहकेन्द्राध्यक्षको मिलेमतो प्रष्ट देखिन्छ । त्यसो त विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बनाएको छानबिन समितिले पनि यस घटनामा संलग्न शिक्षकले अरु शिक्षकहरुको मिलेमतोमा विद्यार्थीलाई होटलमा पु¥याएको लिखित रुपमा नै स्वीकार गरिसकेका छन् । परीक्षाको केन्द्राध्यक्ष प्रधानाध्यापक हुने नियम छ । यस घटनामा प्रधानाध्यापक र सहकेन्द्राध्यक्ष दुवैको मिलेमतो देखिन्छ । यस्तो विषयमा सम्बन्धित निकायले तत्कालै छानबिन गरी घटनामा संलग्न शिक्षकहरुलाई कारवाही गर्न चुक्नु हुँदैन । एउटा छात्राको भविष्यको र जीवनको सवाल छ । यो विषयले छात्रामाथि पर्न सक्ने मानसिक तनाव र दुव्र्यवहार झनै पिडादायी हुन सक्छ । यत्ति हो, सम्बन्धित निकायले कडाईका साथ छानबिन गर्ने हो भने अझै डरलाग्दा विषयहरु उजागर हुनेछन् भन्नेमा कुनै सन्देह नै छैन । ती छात्रालाई मदिरा सेवन गरेपछि शिक्षकले गर्न खोजेको दुव्र्यवहारका विषयमा पनि हामी जानकार छौं ।
तर यतिसम्मको घटना हुँदा पनि विद्यार्थी संगठन, अभिभावक र महिला अधिकारकर्मीहरु मौंन देख्दा भने हामी अचम्मित भएका छौं । एकपटक गएर सोध्नुस् त विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवम् परीक्षाका केन्द्राध्यक्ष सुर्य तिवारीसँग उहाँले कसरी र कुन विधिले परीक्षा लिनुभयो ? कहिले परीक्षाको सूचना सार्वजनिक गर्नुभयो ? कहाँ त्यो सूचना टाँसियो ? अनि ती छात्राहरुलाई लिईएको प्रश्नपत्र कसले तयार पार्यो ? पुरानो आउट भएको प्रश्नपत्र हो कि नयाँ ? उत्तरपुस्तिका कसले दियो ? त्यस उत्तरपुस्तिकामा कसले हस्ताक्षर गर्यो ? उत्तरपुस्तिका कसले चेकजाँच गर्यो ? कसले प्राप्त नम्बर रेकर्डमा चढायो ? त्यो नम्बर कसले काठमाडौंसम्म उत्तरपुस्तिका सहित पठायो ? सबैभन्दा प्रमुख प्रश्न त्यो परीक्षा कहाँ लिईयो ? यति प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने अवस्थामा छन् प्रधानाध्यापक तिवारी, सहकेन्द्राध्यक्ष घनश्याम रेग्मी र शिक्षक शिरिषकुमार वस्ताकोटी । त्यसकारण शुरुमा नैतिकताका आधारमा तीनै जनाको राजीनामा मागेर कानुनी कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल र दवाव दिनु आवश्यक छ । अरु छात्राको परीक्षा पनि शंकास्पद देखिएको हुँदा यस विषयमा गम्भिर छानबिन हुन आवश्यक छ । यदि ती शिक्षकहरुलाई कारवाही गरिएन र जोगाउने काम भयो भने यसले राष्ट्रिय माविको इतिहासमा कालो धब्बा र कलंक नै लाग्नेछ । यदि यस्ता खराब पात्रलाई उनीहरुको अपराध अनुसारको कारवाही गर्न सकियो भने त्यसले विद्यालयको गरिमा र विद्यालयप्रति छात्राहरुको विश्वास झनै बढ्ने छ।